Amatikiti amaxabiso aphantsi eTrenitalia yoLoliwe kunye namaxabiso oHambo | Gcina A Isitimela
Amatikiti amaxabiso aphantsi eTrenitalia yoLoliwe kunye namaxabiso oHambo
ekhaya > Amatikiti amaxabiso aphantsi eTrenitalia yoLoliwe kunye namaxabiso oHambo
Apha unokufumana lonke ulwazi malunga Amatikiti kaloliwe eTrenitalia ashibhile yaye Amaxabiso eTrenitalia yokuhamba kunye nezibonelelo.
izihloko: 1. I-Trenitalia ngabaQeqeshi boLoliwe
2. Malunga neTrenitalia 3. Amagqabantshintshi aphezulu ukuze ufumane iTiketi yeTrenitalia yoThengiso
4. Axabisa malini amathikithi eTrenitalia 5. Iindlela zokuhamba: Kutheni kungcono ukuthatha iTrenitalia, kwaye ungahambi ngenqwelomoya
6. Yintoni umahluko phakathi koqoqosho oluqhelekileyo, Premium, Ishishini kunye noLawulo kwiTrenitalia 7. Ngaba kukho ubhaliso lweTrenitalia
8. Ixesha elingakanani ngaphambi kokuhamba kweTrenitalia ukufika 9. Zeziphi iishedyuli zoqeqesho zoTrenitalia
10. Zeziphi izitishi ezihanjiswa yiTrenitalia 11. I-Trenitalia FAQ
I-Trenitalia ngabaQeqeshi boLoliwe
Inkampani yeTrenitalia yasungulwa nge-1 kaJuni 2000.
in 2005, i Frecciarossa 1000, Umzila kaloliwe okhawulezayo weTrenitalia wamiselwa. Isantya iFrecciarossa 1000 ifikelela kwi-300km ngeyure.
Indlela enkulu yoololiwe bamazwe aphesheya iphakathi kweGeneva neMilan kwaye iyahamba 4 iiyure ezikwiTrenitalia.
I-Trenitalia isebenza iinkonzo zomgama omde kunye noqhagamshelo kunye noololiwe bendawo ukuya naphi na e-Italy.
I-Trenitalia isantya esiphezulu soololiwe yinkonzo eqhagamshela emantla ukuya emazantsi nasempuma entshona e-Italiya nakwi-Itali neSwitzerland, Fransi , Ostriya , no Germany.
the oololiwe be-trenitalia Bahamba ngeenyawo ukuya kwi-3oo km ngeyure kwimigca yesantya esiphezulu.
Ngokuchanekileyo 3 iiyure onokuhamba ngazo usuka eMilan usiya eRoma kwaye usuka eMilan uye eBologna kwi 1 yure.
Yiya e Gcina iKhaya leLoliwe okanye usebenzise lewijethi ukukhangela Uqeqesha amatikiti eTrenitalia
Amagqabantshintshi aphezulu ukuze ufumane iTiketi yeTrenitalia yoThengiso
inombolo 1: Bhuka amatikiti akho eTrenitalia kwangethuba kangangoko unakho
Amatikiti e-Trenitalia ziyafumaneka phakathi 2 ukuba 4 iinyanga ngaphambi komhla wokuhamba. Ukubhukisha itikiti laseTrenitalia ngaphambili kuqinisekisa ukuba ufumana amatikiti asezantsi kakhulu. Amatikiti oololiwe anyuka ngexabiso njengoko usondela kumhla wokuhamba, ukuze yonga imali ngokuthenga kwakho amatikiti, uku-odola kangangoko kunokwenzeka kwangaphambili.
inombolo 2: Ukuhamba nguTrenitalia ngamaxesha exesha
Amatikiti e-Trenitalia ashibhile ngexesha leeyure zokuphumla, ekuqaleni kweveki, kwaye phakathi kwemini kunye naphakathi evekini uhambo ngololiwe (uLwesibini, uLwesithathu, nangoLwesine) ihlala inikezela ngamaxabiso asezantsi. Ngamaxabiso aphezulu, ungathathi oololiwe baseTrenitalia ekuseni nakwintsasa yeveki phakathi evekini (ngenxa yabahambi abaninzi beshishini). Kunqande ukuba kunokwenzeka ukuthatha uloliwe iTrenitalia ngolwesiHlanu nangeCawa ngokuhlwa (ifanelekile iimpela-veki zokufika) nangexesha kwiiholide zikawonke-wonke nangeeholide zesikolo kuba ngala mathuba amaxabiso eTrenitalia amatikiti esibhakabhaka.
inombolo 3: Hlela amatikiti akho eTrenitalia xa uqinisekile ngeshedyuli yakho yokuhamba
Inkonzo yoololiwe iTrenitalia ifuna kakhulu. Itikiti likaloliwe laseTrenitalia Base linokutshintshwa lize litshintshwe ngaphandle komda kwaye itikiti loQoqosho oluqhelekileyo linokulungiswa kube kanye ngaphambi komhla wokuhamba koololiwe. Awunakho ukutshintshiselana okanye ukubuyisela imali kwamanye amatikiti eTrenitalia, kodwa kukho iiforamu kwi-intanethi ongayithengisa ithikithi yeTrenitalia yesibini isandla. Gcina isindululo soQeqesha Ukuhamba ngeTrenitalia Kukubhuka xa uqinisekile ngeshedyuli yakho yokuhamba.
inombolo 4: Thenga amatikiti akho e-Trenitalia kwi Gcina isitimela
Gcina i-Aoliwe ineyona minikelo mikhulu yamatikiti oololiwe eYurophu nakwihlabathi liphela, sifumana amatikiti ashibhile eTrenitalia. Sidibene nabaqhubi boololiwe abaninzi kwaye i-algorithms yetekhnoloji yethu ikunika itikiti elisencinci laseTrenitalia e-Italy kunye nokudityaniswa kwabanye abaqhubi boololiwe kwezinye iindawo.. Sinokufumana ezinye iindlela zokhetho zoTrenitalia.
I-Bari ukuya kwitikiti zeFasano
I-Taranto ukuya kwitikiti zeFasano
Amatikiti eMilan ukuya eFlorence
I-venice ukuya kwitikiti laseMilan
Axabisa malini amathikithi eTrenitalia?
Amaxabiso etikiti laseTrenitalia ngokomzekelo anokuqala kwi-21 Euro ngexesha lokunyusa kodwa angafikelela kwi-97 Euro ngomzuzu wokugqibela. Amaxabiso eTrenitalia amatikiti kuxhomekeka kwiklasi oyikhethileyo kwaye nantsi itafile yesishwankathelo samaxabiso avareji kwiklasi nganye eRoma-Naples / eRoma – milan / milan – Uhambo lololiwe uFlorence:
Itikiti eliya icale elinye Uhambo oluphelele
Imigangatho 21 € – 70 € 40 € – 130 €
Business 47 € – 97 € 90 € – 190 €
Amatikiti eMilan ukuya eNaples
UFlorence ukuya kwitikiti laseNaples
I-venice ukuya kwitikiti laseNaples
Amatikiti ePisa ukuya eNaples
Iindlela zokuhamba: Kutheni kungcono ukuthatha iTrenitalia, kwaye ungahambi ngenqwelomoya?
1) Uncedo loololiwe baseTrenitalia luqala ngento yokuba ungahamba kwaye ufike ngqo kumbindi wesixeko kuso nasiphi na isixeko ohamba kuso. Ngokuqinisekileyo le yinto ekhethekileyo kakhulu koololiwe, ingakumbi ukuba uqeqesha uhambo ukusuka eRoma, milan, Florence, Geneva, okanye iMonaco, sisibonelelo esikhulu kuTrenitalia. Ngenxa yolu hlobo lokuba uhambo luqonde ngqo kumbindi wesixeko, uyakuphepha ukugcwala kwiitrafikhi kwaye akukho nto imbi ngakumbi kunokunamathela kwitrafikhi ekhefini.
Xa kuziwa eTrenitalia amatikiti kaloliwe amaxabiso, amaxabiso athanda ukwahluka rhoqo. Okunye ukukhushulwa kukuvumela ukuba ufumane amatikiti asezantsi kaloliwe, kodwa ngeentsuku zokugqibela ngaphambi kokumka, amaxabiso aya esiba phezulu xa uthanda ukuhamba ngokugudileyo, I-Trenitalia yeyakho!
2) Ukuhamba ngenqwelomoya ngenqwelomoya kuneenkqubo zokhuseleko zesikhululo. Oku kuthetha ukuba kufuneka ubuncinci 2 iiyure phambi kokumka kwakho ocwangcisiweyo. NgeTrenitalia, kufuneka ufike nje 30 imizuzu ngaphambi kwexesha. kwakhona, Kuya kufuneka uye kwisikhululo seenqwelomoya ukusuka kwiziko ledolophu. ke, ukuba ubala lonke ixesha lokuhamba, I-Trenitalia ihlala iphumelela ngexesha lokuhamba lilonke nakwixabiso ukuba ubala ixesha lakho njengemali.
3) Ngamanye amaxesha amaxabiso eTrenitalia amatikiti aphakamileyo kunendiza enqwenelekayo ebusweni, kodwa uthelekiso olo kufuneka lubandakanye ukuba ixabisa malini na ukuthatha nayiphi na indlela yothutho kwisikhululo seenqwelomoya. ngaphandle, kwezinye iimeko, Ukwafumana nexesha lokuphumla xa ukuhamba ngoololiwe bakaTrenitalia okokugqibela noTrenitalia, Awunayo imali yokuhlawula iindleko.
4) Ekugcineni, Iinqwelomoya sesinye sezizathu zokungcoliseka komoya, kwinqanaba lokuthelekisa, Iitreni zeTrenitalia zezi Indawo enobuntu kakhulu, kwaye ukuba uthelekisa inqwelo moya kunye nohambo lukaloliwe, Ukuhamba ngololiwe kungaphantsi kwe-20x yecarbon polluter kuneenqwelo moya.
Amatikiti eMilan ukuya eGenoa
IRoma ukuya kwitikiti laseGenoa
IFlorence ukuya eGenoa amatikiti
Amatikiti eVenice ukuya eGenoa
Yintoni umahluko phakathi koqoqosho oluqhelekileyo, Premium, Business, kunye noLawulo kwiTrenitalia?
I-Trenitalia ibonelela ngeenkonzo zeklasi ezininzi zeklasi ezakhelwe naluphi na uhlahlo-lwabiwo mali kunye nohlobo lomhambi, Nokuba ungumhambi kwishishini, ukuzonwabisa, okanye zombini.
Umahluko ophambili phakathi kweeklasi zamatikiti eTrenitalia lukaloliwe kukungatshintshi kohlengahlengiso lweetikiti, amaxabiso, kunye neenkonzo. Ngapha koko itikiti lololiwe elisemgangathweni yeyona ndlela inexabiso eliphantsi kwaye ineyona ndlela ibhetyebhetye yokuhamba e-Itali.
Amatikiti oqoqosho oMgangatho weTrenitalia:
I-Trenitalia Itikiti lesitimela loqoqosho oluqhelekileyo yeyona nto inexabiso eliphantsi kuyo yonke imali yeTrenitalia. Kungcono ukubhukisha eli litikiti lesitimela ngaphambi kwexesha, kuba amatikiti esiseko ngexabiso eliphantsi – bathengisa ngokukhawuleza. Abahambi abaphethe ithikithi yemigangatho yoLoliwe banokuthatha iisutikheyisi ezifanelekileyo kwisithuba semithwalo, simahla kwaye banokulirhoxisa itikiti labo kuloliwe ngaphambi kokuba bemke kwaye bafumana ukubuyiselwa imali ngokuyinxenye (intlawulo yokuncitshiswa 20%).
Amatikiti oqoqosho e-Trenitalia yePremium:
Olu klasi lweetikiti lukaloliwe lubiza ngaphezulu kohlobo lweTititalitalia yetaiti, i Itikiti lePrimiyali yeTrenitalia ibonelela ngeenkonzo ezongezelelweyo. Olu hlobo lwetikiti lololiwe luyafumaneka koololiwe abakwiTrenitalia kwaye bavumela utshintsho lwexesha nomhla kube kanye ngaphambi komhla wokuhamba..
Ukongeza kwizibonelelo zetikiti elililo eliqhelekileyo, Amatikiti e-Trenitalia yoqoqosho I-premium abonelela ngezihlalo ezifanelekileyo ngegumbi elingaphezulu lomgangatho kunye nezihlalo zokuhlala kwakhona kumgama omde. Ngaphezu koko, Kukho iimenyu ezintathu zokutya onokukhetha kuzo kunye nokutya okukhanya kunye neziselo ziya kuthunyelwa esihlalweni sakho phezu koololiwe baseTrenitalia.
Amatikiti e-Business Treintalia:
the Itikiti lokushishina ngeTrenitalia abathengi banokonwabela zonke izibonelelo esizibhalileyo ngasentla kodwa, abakhweli beNkulumbuso yeShishini laseTrenitalia bayazuza kwiingxowa ezininzi zemithwalo, izihlalo zesikhumba ezifanelekileyo ze-ergonomic, igumbi elandisiweyo, Iimenyu ezintathu zokutya onokukhetha kuzo. Ngapha koko uneendonga zobumfihlo kunye nendawo yokuthula kwiindawo zeShishini ezichongiweyo koololiwe baseTrenitalia.
Amatikiti olawulo e-Treintalia:
the Itikiti lolawulo lweTrenitalia abathengi banokuzonwabela zonke izibonelelo ezichazwe apha ngasentla ukongeza kwizitulo zesikhumba ezibanzi ukuze babeke iintloko kwaye banandiphe umbono olungileyo we-Italy.
Ngaba kukho ubhaliso lweTrenitaliaIsifundo?
IPasi yabo i-Italiya, kodwa icetyiswa kuphela njengenketho yexabiso eliphantsi ukuba ucwangcisa ukuqeqesha ukuhamba ngaphezulu 14 iintsuku, ubhaliso luvumela ukuhlola i-Itali ngoololiwe ngohambiso olukhethekileyo. Nazi 3 amanqanaba okuphumelela: Easy, Comfort, kunye noLawulo kwaye unokukhetha inani leehambo ezisuka 3 ukuba 10 kunye nokukhetha uhlobo loololiwe ukusuka kwisantya esiphezulu kwiFrecce ukuya kunxibelelwano kunye ne-EuroCity.
Ukudlula kufumaneka ngefomathi yamaphepha kwaye kufuneka kusebenze ngaphakathi 11 iinyanga ukusukela kumhla wokuthenga.
Ixesha elingakanani ngaphambi kokuhamba kweTrenitalia ukufika?
Ukufumana uqeqesho lwakho lweTrenitalia kwaye ube ulungile ngexesha elifanelekileyo, uloliwe ucebisa ukuba afike okungenani 30 imizuzu ngaphambi kokuba uloliwe ahambe. Eneneni thina ku Gcina A Isitimela, ndiyakholelwa ukuba lixesha elaneleyo kwaye ungonwabela iivenkile kwaye ufumane ezo zinto uzifunayo Uhambo lukaloliwe ukuze lubhetyebeke kangangoko kunokwenzeka.
Zeziphi iishedyuli zoqeqesho zoTrenitalia?
Lo ngumbuzo onzima kodwa lowo Gcina uQeqesho ungawuphendula ngokupheleleyo kunye nexesha langempela. Ngenkcukacha yiya kwiphepha lethu lasekhaya, chwetheza kwimvelaphi yakho kunye nendawo oya kuyo e-Italy, kwaye unokufumana ezona zichanekileyo Iishedyuli zoqeqesho lweTrenitalia nazi. Uloliwe weTrenitalia uqhuba kwangoko 6 am ukuba 11 pm ngokuhlwa ukusuka eMilan ukuya eBologna, ukucacisa uninzi loololiwe baseTrenitalia ukubaleka kude kube ngorhatya ngololiwe ohamba yonke isiqingatha seyure okanye njalo.
Zeziphi izitishi ezihanjiswa yiTrenitalia?
I-Trenitalia igubungela yonke i-Italiya, nangona kunjalo izikhululo zikazwelonke eziphambili: milan, eRoma, Venice, Naples, eTurin, Bologna, Geneva, Florence, no Verona. Nazi 11 Izikhululo zamazwe aphesheya: 5 Izikhululo zikaloliwe zaseTrenitalia eSwitzerland kunye 6 Izikhululo eFrance nezinye ezimbalwa eOstriya naseJamani naseCroatia. Ke kuyacaca ukuba ungahamba kakuhle kwaye ukhawuleze uhambe ngeYurophu entle kwaye uthande imibono yase-Italiya ngaphandle kokuphosa nto!
Esona sikhululo sikaloliwe sikhulu eMilan sisesona sixakekileyo Piazza Duca d'Aosta. Isikhululo sikaloliwe siyamangalisa ngokwakhiwa kwaye singqongwe ngabahambi ngeenyawo. Ke ngelixa ulinde ukukhwela uloliwe weTrenitalia ungahamba ujikeleze imifanekiso emnandi.
eRoma Termini sesinye sezona zikhululo zikaloliwe ezinkulu eYurophu. Ime khona ngqo ukusuka kwindawo yokuhlambela ka-Diocletian kwiRoma yamandulo. Umnyango wokungena e-terminal uvela kwiPiazza dei Cinquecento. Nazi 29 amaqonga e-terminal kunye ne-Trenitalia's ofisi yamatikiti kuloliwe wesikhululo sikaloliwe.
Isikhululo sikaloliwe saseFlorence, Santa Maria Novella, kukuhamba nje okufutshane ukusuka eDuomo kunye nomtsalane omkhulu kwidolophu yakudala yaseFlorence. Isikhululo sibizwe emva kwecawa yaseSanta Maria Novella ngaphaya komnyango wayo. ke, ungabba ngokulula amaxeshana aliqela amahle kwidolophu yakudala, ngaphambi kokuba uqhubeke kwi uhambo olulandelayo e-Itali.
I-Naples terminal isempuma kwidolophu yakudala. Ukuba ucwangcisa ukwenza ezinye uhambo losuku oluvela eNaples ukuya ePompeii okanye eSorrento, ke ngokuqinisekileyo uya kuma kwisikhululo sikaloliwe saseNaples kuhambo lwakho lukaloliwe.
Ukuba awuqinisekanga ukuba yeyiphi na isikhululo sikaloliwe esiya kukhethwa phakathi kwesixeko osindwendwelayo, Senze kwisiza sethu Zonke Izikhululo kuninzi lweedolophu ezinkulu, ke i-algorithm yethu iya kukunyusela isitishi esifanelekileyo ukuba ushiye kwaye ufike.
Yintoni endifanele ndiyizise eTrenitalia?
Okubaluleke ngokulinganayo kukuzizisa kuhambo lweTrenitalia kubalulekile. Ngaphezulu kwayo qiniseka ukuba uxwebhu lwakho lokuhamba lweTrenitalia kwifowuni yakho okanye oluprintiweyo kunye nencwadana yokundwendwela efanelekileyo kufuneka kusoloko kulungile ukuba ne-inshurensi yokuhamba.
Yeyiphi inkampani iTrenitalia?
I-Trenitalia ngurhulumente wase-Italiya kwaye iyinxalenye yeqela le-FS Italiane.
Trenitalia FAQ ndingaya phi neTrenitalia?
Okweengingqi, oololiwe abakhulu nakwamanye amazwe, Izitimela zeTrenitalia zingakuthatha naphi na e-Itali nakumazwe akhethiweyo anemida ne-Itali. Umzekelo, ngezitimela zeTrenitalia ezihamba ngesantya esiphezulu ungahamba uye eFrance naseSwitzerland.
Zithini iinkqubo zokubhoda zeTrenitalia?
Amatikiti kaloliwe okukhwela kunye nokukhwela kwiTrenitalia akukaze kube lula. Ungathenga ngokulula itikiti lakho leTrenitalia ngomzuzu wokugqibela kwi-intanethi ukuya kuthi ga 1 iyure ngaphambi kokuhamba koololiwe. Ukukhwela, konke okudingayo yipasipoti kunye nokubonisa ikhowudi ye-PNR (6-ikhowudi yedijithali). Ukucacisa, ikhowudi ye-PNR ithunyelwa kuwe kwi-imeyile yokuqinisekisa yokubhukisha kunye netikiti ze-e. Awudingi uprinte itikiti lesitimela ngaphambi kwexesha kuba liyafumaneka kwiselfowuni kwaye liqhotyoshelwe kwi-imeyile yokuqinisekisa, kwaye isilawuli sikaloliwe sinokuqinisekisa itikiti lakho ngegama elibi kakhulu kwimeko.
Zeziphi iinkonzo kwi-Trenitalia?
Oololiwe beTrenitalia banesitayile se-cafe-bar esimiselweyo esenzelwe iziselo kunye nokutya okukhanyayo. Imenyu ibandakanya iisandwich, Iitshokholethi itshokolethi, okulula, imivalo yetshokholethi, kofu, Itshokolethi eshushu, kunye neti kwaye ungatya kwaye usele kule venkile yokutya kaloliwe okanye uthathe into oyithengileyo kwisitulo sakho. Ukuba uhamba ngeShishini, Premium, okanye kwiklasi yokuqala unokukhetha isiselo simahla sokwamkelwa kukhetho lwe 9 iziselo ezikhoyo kunye neswiti, okunencasa, okanye i-snack-free free. Kuzo zonke izitimela zeTrenitalia, kukho iindawo ezitsala umbane ecaleni kwesihlalo sakho.
Eyona nto iceliweyo yeTrenitalia FAQ – Ngaba kufuneka ndibhukishe isihlalo ngaphambili kwiTrenitalia?
Xa ugcina itikiti laseTrenitalia, isihlalo sabelwe ngokuzenzekelayo kwaye awukwazi ukugcina isitulo esikhethekileyo xa usenza ubhukisho. Ukuba kukho izihlalo zasimahla xa uloliwe, uvunyelwe ukuba ujikeleze, Utshintshe izitulo, kwaye ube nendawo eyahlukileyo.
Ngaba kukho i-intanethi ye-WiFi ngaphakathi kweTrenitalia?
Xa uthenga amatikiti akho eTrenitalia kwangaphambili, ungonwabela Intlawulo ye-Intanethi ye-WiFi yasimahla Kuzo zonke iitrenitalia frecciarossa zoololiwe bohlobo kunye neeklasi.
Ukuququmbela, ukuba ufikelele kule ndawo, Uyazi yonke into ekufuneka uyazi malunga noololiwe baseTrenitalia kwaye bakulungele ukuthenga itikiti lakho loLoliwe iTrenitalia SaveATrain.com.
Ngaba uyafuna ukumisela eli phepha kwindawo yakho? Cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-trenitalia%2F%0A - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela), Okanye unokuxhuma ngqo kweli phepha.
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml kwaye ungayitshintsha / iguqule ku / nl okanye / fr kunye nezinye iilwimi.